Nagu Saabsan - Huai 'Qalabka Caafimaadka ee Hongyu Co., Ltd.
Caafimaadka Hongyu xakamaynta tayada waaxda waxaa loo sameeyay inay si adag u baarto tayada qalab kasta, oo ay ku jiraan muuqaalka, cabbirrada, saxnaanta, iyo xirmada. Baadhitaanada oo dhan waa inay ahaadaan sida waafaqsan dalka iyo heerka gudaha, sidoo kale shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha. Gaar ahaan macaamiisha 'shuruudaha qaaska ah ee amarada, shaqaalaha kantaroolka tayada ayaa had iyo jeer qaata faahfaahin dheeraad ah oo culus, si ay u buuxiyaan baahiyaha macaamiisha gabi ahaanba. Qaabka qalab kasta oo ka socda Waxsoosaarka Caafimaadka ee Hongyu uu had iyo jeer yahay waxa ay macaamiisheennu ka filayaan kantaroolka tayada. waxaa loo tixgelin doonaa inay muhiim noo tahay, sidii soo saarista OEM / ODM xirfadle ah oo laga sameeyay Shiinaha.
Kontroolka ugu muhiimsan ee KPI (Tusmada Waxqabadka Muhiimka ah):
1.Materi. Maaddooyinka qalabka Qalabka Caafimaadka ee Hongyuur waa inay ahaato mid waafaqsan nidaamka GB / T1220-2007 iyo GB / T3620.1-2016.
2.Siise dulqaadka. Cabbirka dulqaadashada aaladaha caafimaadka ee Hongyu waa inay ka yaraataa dulqaadka lagu muujiyey sawirada caadiga ah.
3. Si siman oogada kore. Dusha sare ee jilicsanaanta dhammaan qalabka Caafimaadka ee Hongyu waa inay ka yaraataa 0.8µm. Muuqaalka waa in la hubiyaa.
4.Harginimada baarista.Tijaabadu waa in loogu shaqeeyaa sidii caadiga ahayd GB / T230.1-201.
5.Anti-corrosion test.Tijaabada biyaha karkaraya waxaa had iyo jeer loo isticmaalaa si waafaqsan heerarka YY / T 0149-200
Sida aan ognahay, xakameynta tayada adag ayaa aasaas u ah aaladaha tayada sare leh. Hongyu Medical waxay had iyo jeer si dhab ah u qaadataa faahfaahinta alaabada oo dhan waxayna macaamiisha u xaqiijisay aaladaha caafimaad ee wanaagsan.
Adeegga Iibka ee Ka gadaal Xannaanada Caafimaadka ee Hongyu
Huai'an City Hongyu Qalabka Qalabka Co., Ltd. iyada oo la waafajinayo "sumcadda koowaad, sharafta koowaad" mabda'a, ayaa sameeyey ballanqaadyada adeegga soo socda:
1. Qaybinta adeegga macluumaadka bilaashka ah, taageero farsamo;
2. Adeegga dammaanadda ayaa la siiyaa.
3. Jawaabta gudahooda 24hrs gudahooda wixii su’aal ah. Codsigaaga waa la aqbali doonaa 24 saac gudahooda marka aad noo soo dirto dalabkaaga bartayada internetka.
4.Fast gudbinta waqtiga. Sidii caadiga ahayd, muunaddaada saamiga ayaa lagu bixin doonaa 48hrs gudahood.
5. Na soo raac oo farriinta dhaaf waqti kasta: